Ahoana ny fomba hanovana ny Samsung ho Samsung Galaxy S8. Miasa Bixby miasa !! | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fampiharana Android, Samsung, Tutorials
Amin'ity lesona fampisehoana video manaraka ity dia hasehoko anao ny fomba hamadihana ny Samsung ho Samsung Galaxy S8 raha ny fisehoany maso. Hahatanteraka izany isika amin'ny alàlan'ny fisintomana sy fametrahana ireo andiany farany an'ny Touchwiz an'ny Samsung Galaxy S8 ary ny mpanampy virtoaly Bixby koa an'ny Samsung Galaxy S8.
Tsara homarihina sy hamafisina fa mba hametrahana ireo rindranasa ireo izay hamadika ny Samsung ho Samsung Galaxy S8, tsy mila mpampiasa ROOT na zavatra toy izany isika, fampidinana mivantana fotsiny ny fisie roa amin'ny endrika apk ary zip misy ny sary am-boalohany Samsung Galaxy S8 amin'ny famahana tanteraka fa tsy misy zavatra hafa, tsy misy hafa noho izany. Mazava ho azy fa ny hany takiana mba hahatratrarana dia ny manana terminal marika Samsung ary havaozina amin'ny Android 7.0.
Izaho manokana dia nanandrana izany tamin'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus miaraka amin'ny firmware Android 7.0 ofisialy farany tsy misy Root alaina avy amin'ny Sammobile ary nohavaozin'i Odin telo na efatra andro lasa izay ary ny marina dia tsy nanana olana tamin'ny fametrahana ilay apk ilaina aho.
Izaho koa dia nanao an'io a Samsung Galaxy S7 Edge avy amin'ny mpiara-miasa iray manontolo avy amin'ny orinasa ary tsy misy Rooting ary ny valiny dia mitovy, fahombiazana tanteraka na dia misy aza ny fatiantoka fa ny baiko Bixby dia mbola tsy mandeha ivelan'ny firmware ofisialin'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 +, na dia tsy nisafidy ny hametraka ilay fiteny ho default amin'ny teny anglisy aza ianao.
1 Sintomy ny Touchwiz avy amin'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 +
2 Sintomy ny apk Bixby avy amin'ny Samsung Galaxy S8
Sintomy ny Touchwiz avy amin'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 +
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ampidino ny kinova farany an'ny Samsung's Touchwiz, ny kinova Touchwiz Home 6.0.77 azo alaina avy hatrany amin'ity rohy ity.
indray mandeha sintomina ny apk ny Touchwiz Home 6.0.77, ny Touchwiz an'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 +, tsy mila tsindrio fotsiny ilay fampandrenesana fampidinana mahomby ary, aorian'ny famelana ny safidy ao anatiny Fikirana / efijery hidin-trano sy fiarovana, ny safidy tsy fantatra loharanom-baovao, mila tsindrio fotsiny ny safidy apetraka hanavaozana ilay kinova vaovao an'ny Samsung's Touchwiz an'ny Samsung Galaxy S8 izay iray amin'ireo zava-baovao lehibe indrindra dia ny safidy hikorisa hiditra dia ahafahana miditra ao amin'ilay vatasarihana fampiharana an'ny Android tahaka ny ataontsika ao amin'ny Google Pixel.
Safidy iray hafa haneho hevitra momba azy io raha izao raha mamorona hitsin-dàlana mankany amin'ny kalandrie na ny fampiharana famantaranandro Samsung isika, ny rindranasa roa dia miasa amin'ny fanamarihana ny fotoana ankehitriny avy amin'ilay kisary mihitsy, toy ny ataon'ny iPhone 7, ary ny iray hafa manamarika ny daty misy azy ao anatin'ny kisary fampiharana ihany.
Sintomy ny apk Bixby avy amin'ny Samsung Galaxy S8
Ilay apk hafa ilaina avadiho ho Samsung Galaxy S8 ny Samsung anao Hahafahantsika misintona azy amin'ny tranokala iray ihany ary hametraka azy amin'ny fomba nitovy tamin'ny nataontsika tamin'ny Touchwiz avy amin'ny Samsung. Ho an'izany loharanom-baovao tsy fantatra ihany no ampiasainay y izahay dia tsindrio ny rakitra apk alaina avy amin'ity rohy ity ary tsy misy afa-tsy ny fanamafisana ny fametrahana azy.
Ity apk ity no apk voalohany ary tsy misy fanodikodinan'i Bixby an'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 + Ary rehefa asehoko anao amin'ny horonantsary ity dia vitako ny nametraka azy tamin'ny maodeliko Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928F Android 7.0 tany am-boalohany nefa tsy novaina Root na Recovery.
Raha vantany vao vita izany dia tsy maintsy manao izany fotsiny isika ampidino ny zip-n'ireo wallpaper ofisialin'ny Samsung Galaxy S8 sy S8 + avy amin'ity rohy ity ihany ary esory eo amin'ny toeran'ny Android izay manome antsika ny tena faniriana.
Tsy maintsy misafidy default amin'ny Touchwiz Launcher an'i Samsung fotsiny isika izao raha mampiasa Android Launcher iray hafa izahay, ary avy eo averinay indray ilay terminal hahafahantsika mampiasa ny safidy Bixby na dia misy aza ny mampiavaka azy izay mbola tsy mandeha amin'ny maodely hafa ankoatry ny Samsung Galaxy S8.
Rehefa mandrehitra ny terminal indray ianao ary manindry sy mitazona izay ampahany maimaim-poana amin'ny efijery an-trano an'ny Samsung antsika, afaka miditra isika Fikirakirana Touchwiz ahafahantsika manamboatra azy io araka ny itiavantsika azy ary manamboatra an'i Bixby araka izay tratra ary amin'ny zavatra avela hananantsika araka ny Samsung ampiasainay.
Rehefa napetrakao araka ny itiavantsika azy, Ny hany sisa tavela dia ny fampiharana ireo Wallpaper Samsung Galaxy S8 fa efa nisintona sy namongotra ny memoara anatiny sy ivelany an'ny Android misy antsika teo aloha isika, ao amiko manokana ao amin'ny fahatsiarovana anatiny an'ny S6 Edge Plus satria tsy misy fanohanana an'i SDcard.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanovana ny Samsung ho Samsung Galaxy S8. Miasa Bixby miasa !!
Ale Paz dia hoy izy:
amin'ny S7 misy 7.0 dia tsy halefako!
Valiny tamin'i Ale Paz
pfinalphpspin dia hoy izy:
Tsy manoro hevitra aho ny hametraka ny apk, mbola maitso be izy io, ny sisin'ny s7 dia nametaka ahy tanteraka ary mitafy mainty aho hanalana azy.
Valiny amin'ny pfinalphpspin
Eny, araka ny hitanao amin'ny horonantsary, nametraka azy tao amin'ny S6 Edge Plus miaraka amin'ny Android 7.0 izay navaozina vao haingana aho ary tao amin'ny S7 Edge Plus ary tsy mbola nanana karazana bug, dia bebe kokoa araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary ny tenany amin'ny S6 Edge Plus-ko dia mandeha tsara.
Alberto escobar dia hoy izy:
Inona ny apk tsy mandeha?
Valiny ho an'i Alberto Escobar
Nahazo tsara ihany koa aho amin'ny sisin'ny s7. Niadana be ny telefaona, saika tsy azo ampiasaina. Tsy maintsy namerina backup aho mba hamerenako ny telefaonako ara-dalàna. Na ny fanesorana ny fanavaozana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny telefaona dia tsy nety. Tsy manoro hevitra an'iza na iza hametraka azy aho.
Miguel Cervantes sary placeholder dia hoy izy:
Ao amin'ny S7-ko tsy mandeha izy dia milaza fa nisy fifanoherana tamin'ny fonosana ptm
Valiny tamin'i Miguel Cervantes
Gau Thomas dia hoy izy:
Mamaly an'i Gau Tomás
MARG dia hoy izy:
Tena ilaina sa tsia?
Valio amin'i MARG
David ugarte dia hoy izy:
Izy io dia miasa tanteraka amin'ny Samsung galaxy S6 edge g925i misy rindrambaiko 7.0 ofisialin'ny g925f, misaotra zandry kely
Valiny tamin'i David Ugarte
Morgan dia hoy izy:
Na ahoana na ahoana fomba hanesorana azy io ary hiverina amin'ny touchwiz tany am-boalohany ny sisiko S7….? Satria mendrika izany, dia nampidina ny fampisehoana ary manana lagsy bitika manerana ny toerana. Misaotra
Valiny tamin'i Morgan
Manova ny tenako aho, manamboatra, manaisotra ny bixby ary manafoana ny touchwiz ary manaisotra ny fanavaozana ary miverina amin'ny zanatany ary manomboka indray. Miverina amin'ny ara-dalàna ny zava-drehetra.
Israel Garcia dia hoy izy:
Salama bixby sy launcher dia miasa tanteraka amin'ny teny espaniola s7 edge rom ... samy misy faka na tsy misy ... fa tsy bixby ... na farafaharatsiny tsy ho ahy ...
Valiny tamin'i Israel Garcia
Andres Alcaraz dia hoy izy:
Nametraka azy teo amin'ny sisiko s7 aho ary ny ampitson'iny rehefa namadika azy aho dia niditra tamin'ny fomba azo antoka ary tsy nisy na inona na inona ... avereno ny orinasa avy amin'ny fanarenana tsy maintsy nataoko.
Valiny tamin'i Andres Alcaraz
Sebastian Velazquez dia hoy izy:
Salama, nametraka ilay mpandefa aho fa milaza amiko fa ny fonosana dia mifanipaka amin'ny fampiharana efa misy hafa izay manana anarana mitovy. Misy hevitra ve?
Valiny tamin'i Sebastian Velazquez
Ulefone Power 2 dia hanana Android 7.0 Nougat ho fenitra